AmaProteas azozama ukubuyisa isithunzi ngeyeT20 ePakistan - Impempe
AmaProteas azozama ukubuyisa isithunzi ngeyeT20 ePakistan
UMark Boucher ocija amaProteas akeneme ngendlela ababhethe ngayo bebhekene nePakistan kwiTest yesibili
Ngemuva kokushaya udaka emidlalweni yamaTest emibili amaProteas ebhekene nePakistan ekuhambeni, azozama ukubuyisa isithunzi ngeyeT20 eqala ngoLwesine.
Kusale kunemibuzo ngendlela ababhetha ngayo abadlali bamaProteas kulandela ukuthelwa othulini yiPakistan ngo 2-0 ochungechungeni lwemidlalo yamaTest, eNational Stadium naseRawalpindi Cricket Stadium.
Emdlalweni wokuqala iqembu lakuleli lishaye into ephansi kakhulu lithelwa othulini ngamawikhethi ayisikhombisa. Kowesibili bekunethemba lokuthi ezikaMark Boucher zizovuka zizithathe. Nokho konakale sekuthenjiwe zishaywa ngama-run angu-95 ngosuku lokugcina lweTest eRawalpindi Stadium.
Okushiya imibuzo kakhulu ngesimo samaProteas ukuthi abadlali abafana noQuinton de Kock (ukaputeni), Dean Elgar (ozamayo nokho), Aiden Markram, Faf du Plessis noTemba Bavuma, kungani behluleka ukuthwala iqembu ngendlela efanele uma bebhetha ngoba banawo amava.
Lokhu kufaka ingcindezi kuyena uDe Kock osanda kuthatha njengokaputeni wamaProteas. Ekhuluma ngemuva kokubhacaza kwiTest yesibili uBoucher ukubalulile ukuthi abenzi okwanele ngezikhathi ezibalulekile zomdlalo ukuze iqembu lishaye intambo.
“Indlela esidlale ngayo ngezikhathi ezimqoka isenzele phansi kakhulu. Indlela yethu yokuqaphela umdlalo nokuthi yinini lapho okumele siqinise khona ibingekho nhlobo. Yisona isizathu lesi esenze ukuthi sishaywe,” kusho uBoucher.
“Asizange sibhethe kahle, futhi asizange sibe bahle enkundleni ngesikhathi kubhetha bona kodwa abashwibi bethu yibona abenze kangcono. Siwakhile amathuba enkundleni kodwa sangawathatha. Lokhu kusenzele phansi kakhulu ngoba kulo mdlalo nje uwodwa sidedele ama-run angu-150 kungafanele.”
I-T20 yokuqala phakathi kwePakistan neNingizimu Afrika ingoLwesine ngo-12.30 emini eGaddafi Stadium, eLahore. Eyesebili ingoFebhuwari 13 kanti bazovala ngeyokugcina ngoFebhuwari 14 enkundleni efanayo.
Previous Previous post: Uveza izizathu ezenza ashintshashintshe iqembu njalo uZinnbauer weBucs
Next Next post: UMaduka ujabule ngamaphuzu ‘abawantshontshe’ kwiSuperSport